चीनले भेनेजुयलामा पठायो अर्को जहाज - Paschimnepal.com
चीनले भेनेजुयलामा पठायो अर्को जहाज
राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा चीनले दोस्रो मानवीय राहत सामग्रीसहित जहाज पठाएको छ। रूसी समाचार संस्था स्पुतनिकका अनुसार ७१ टन राहत सामग्री बोकेको चिनियाँ जहाज सोमबार काराकास विमानस्थलमा पुगेको हो।
चीन र भेनेजुयलाबीचको मानवीय प्राविधिक सहायता सम्झौताअनुसार राहत सामग्री ल्याएर जहाज आएको भेनेजुयलाले जनाएको छ। जहाजले औषधीलगायत अन्य राहत सामग्री ल्याएको जनाएको छ।
भेनेजुयलाका लागि चिनियाँ राजदूत ली बाओरोङले यो राहतले विदेशी प्रतिबन्धका कारण खराब भएको अवस्थालाई केही सुधार गर्ने आशा गरिएको बताएका छन्।
चीनले पहिलो पटक गत मार्च २९ मा राहत बोकेको जहाज भेनेजुयला पठाएको थियो। उक्त जहाजले ६५ टन राहत लिएको थियो।
झन्डै चार महिनाअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवान गुवाइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुयलामा निकोलस मडुरोका वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। अमेरिकालगायत धेरै दक्षिण अमेरिकी मुलुकले गुवाइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन्। तर मडुरोलाई रूस र चीनले साथ दिइरहेका छन्।
मडुरोलाई सहयोग गर्न रूस गत चैतमा सैन्य विमान पठाएको थियो।
दुईमध्ये एक विमानमा रूसी सैनिक रहेको र अर्कोमा ३५ टन राहत सामग्री थियो।
प्राविधिक सैन्य सम्झौता पूरा गर्न विमान काराकास गएको जनाइएको थियो। भेनेजुयला र रूसले तीन महिनाअघि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए।
रूस लामो समयदेखि भेनेजुयलाको पक्षमा उभिदै आएको छ। दुई महिनाअघि प्रतिपक्षीको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाका नेता हुवान गुवाइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि रूस झन बलियो गरी राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको पक्षमा उभिएको छ।
गुवाइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने र मडुरो सरकारमाथि नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकी कदमको रूसले विरोध गर्दै आएको छ।
भेनेजुयला विवादमा नेपाल पनि मुछिएको थियो। गत माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको कडा आलोचना गरेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयाला चर्चा भएको थियो।
भेनेजुयलामा भएको के हो?
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख ३१, २०७६ 4:52:57 PM
Prevरोनाल्डो हिँडेपछि रियल मड्रिडको दुर्दशा : २१औं शताब्दीकै ‘खराब’ सिजन !
Nextजाजरकोट अस्पतालमा भेरी नगरपालिकाले जडान गर्यो उत्कृष्ट सिस्टम